Uvavanyo olutsha olunzima lokufika kwesikhululo senqwelomoya ePrague
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Uvavanyo olutsha olunzima lokufika kwesikhululo senqwelomoya ePrague
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCzechia Breaking • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Kude kube kukwakho esinye isaziso, utshintsho olwenziwe kwizikhululo zeenqwelo moya ePrague luya kuchaphazela abakhenkethi kunye nabemi beRiphabhlikhi yaseCzech kunye namazwe e-EU + abuyela kwiRiphabliki yaseCzech.
Isikhululo senqwelomoya sasePrague ukuqinisa ukukhangela abakhweli ekufikeni.
Isikhululo senqwelomoya sasePrague siza komeleza ulawulo lweemeko ezikhoyo ngoku zokungena kweli lizwe.
Ukusukela nge-1 kaSeptemba 2021, inkqubo yokufika yabo bonke abakhweli abahamba ngenqwelomoya ukuya ePrague Airport iya kulungiswa.
Ngokwendlela entsha yokhuselo emiliselwe liSebe lezeMpilo laseCzech Republic, kwisikhululo senqwelomoya sasePrague, amaPolisa angaphandle eRiphabhlikhi yaseCzech kunye nolawulo lweCustoms kwiRiphabhlikhi yaseCzech luya komeleza ulawulo lweemeko ezikhoyo ngoku zokungena kweli lizwe.
Ngokudibeneyo, amaqela ayaphendula kuthungelwano olwandayo ngokuthe chu Isikhululo senqwelomoya sasePrague kunye nokubanakho ukutyelela eli lizwe kwimisebenzi yezokhenketho ngabantu bamanye amazwe.
Ukusukela nge-1 Septemba 2021, inkqubo yokufika yabo bonke abakhweli abahamba ngenqwelo moya ukuya IVáclav Havel kwisikhululo senqwelomoya ePrague iya kuhlengahlengiswa. Kude kube kukwakho esinye isaziso, utshintsho olwenziwe kwizikhululo zeenqwelo moya ePrague luya kuchaphazela abakhenkethi kunye nabemi base Umphakathi waseCzech kunye namazwe e-EU + abuyela kwiRiphabhlikhi yaseCzech.
Isikhululo seenqwelomoya siyaqhubeka ukukhuthaza abakhweli ukuba baphonononge ngokupheleleyo imigaqo ephunyezwe kwangaphambili. Ngaphambi kokumka kwabo ePrague, bebefanele ukuba bazilungiselele, kwaye baziprintile, onke amaxwebhu, iifom zokufika kunye nokuqinisekiswa kokungosuleli, ukuba kuyafuneka.
“Silungelelanisa le modeli intsha nabameli beSebe lezeMpilo kunye neminye imikhosi yezokhuseleko ekhoyo kwisikhululo seenqwelomoya. Sikwanyusa inani labasebenzi bethu kwaye siqinisa izixhobo zobuchwephesha ukukhawulezisa yonke inkqubo yokungena kwabo bafika. Abakhweli banokunceda ukukhawulezisa iitsheki zokufika kweCzech, nabo, ngokuthi baphonononge imeko yangoku kwaye balungiselele onke amaxwebhu kwangaphambi kwexesha, ”utshilo uJiří Kraus, uSekela Sihlalo weBhodi yabaLawuli beeNqwelo moya ePrague.